*Clubhouse* Van Meter kanye ecaleni kwe-GAP Trail!
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJulia
Wamkelekile kwindlu yeklabhu! Indlu encinci kwi-stilts ebekwe ecaleni kwendlela yoMlambo i-GAP! Lala phantsi kweenkwenkwezi ujonge isibhakabhaka kwaye umamele oololiwe njengoko bedlula. Le ndawo inegumbi elaneleyo lokuhlala iindwendwe ezi-2 kuba ngokusisiseko iligumbi elinye elinendawo encinci yokuhlambela. Uya kuba nokufikelela kwiidekhi zangaphandle, inkundla yebhasikithi, kwaye ngokusisiseko nantoni na oyifunayo sinokuzama konke okusemandleni ethu ukubonelela!
Indlu yethu yeklabhu yindlu encinci ekwistilts enepatio ekhanyiswe ngaphantsi enetafile kunye nezitulo. Yonke idityaniswe ngokuhombisa indlu yethu. Kukho izitulo ezininzi zepatio kunye neetafile ozisebenzisayo kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwindlela yebhayisekile kunye nokufikelela kwinkundla yebhasikithi ebekwe ngaphesheya kwesitalato. Enye into epholileyo phantsi kwendlu sisikhenkcisi nesikhenkcezisi esiqulathe iziselo, amashwamshwam, kunye ne-ayisikrimu onokuyifumana ngesipho kude kube malunga nentsimbi yeshumi ebusuku. Ngenxa yobukhulu bendawo yethu sincoma ukuhlala ubuninzi beeveki ezi-2. Indlu yethu encinci ayifanelanga ukuhlala iinyanga. Enkosi ngokuqonda!
Iclubhouse ikwipropathi enye neSouth Yard Depot. Kulapho sibonelela ngeziselo, ukutya kunye ne-snacks kumnikelo. Sikwakufuphi nomlambo omncinci kwaye ngqo ecaleni kwendlela ye-GAP.
Ukuba uyathanda ukunxulumana sonke sinako ngokupheleleyo ukuthetha nawe. Sikwayaqonda ukuba imfihlo yakho ibalulekile; ngoko sikuyekela ngokupheleleyo kuwe!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Smithton